Akụkọ - Nghọta banyere ebu mma: ịme na ntụle nke uru na ọghọm dị na mma dị iche iche na-anwụ
Nghọta nke ebu mma: eme na ntụle nke uru na ọghọm dị iche iche mma na-anwụ
▶ moldghọta ihe eji akpụzi ngwá ọrụ
E nwere ihe karịrị 100 iche nke mma na okwu nke agụba n'akuku, ekweghị ekwe nke agụba na agụba, ọka nke agụba na n'elu nhazi technology nke agụba na agụba.
Mmepe na mmepụta nke ngwa ọrụ dabere na nghọta miri emi nke ngwaahịa ndị ahịa chọrọ ihe ọmụma na akụrụngwa. A na-ewepụta ihe ọmụma ndị ahịa chọrọ igosipụta na eserese ihe osise ahụ, yabụ anyị kwesịrị inyocha eserese mbụ, gbanwee ihe ndị ahịa chọrọ ka ọ bụrụ usoro nke aka ha na ngosipụta nke ngwaahịa ikpeazụ.
Nhazi nke usoro mmepụta chọrọ ndị injinia inwe nghọta dị ukwuu banyere ihe. Ihe ọzọ dị mkpa bụ ịnweta nghọta nke arụmọrụ nke igwe nke ụlọ ọrụ anyị. Enwere ike ikwu na ịghọta ihe na ịghọta arụmọrụ nke igwe bụ ọrụ ndị bụ isi ndị injinia ga-enwerịrị.
Mara ihe ndị ahịa chọrọ, mara njirimara nke akụrụngwa, jikọta arụmọrụ arụmọrụ nke igwe anyị, wee rụọ ọnọdụ nke mmepụta n'uche. Kedu otu esi edozi nsogbu? Ihe ngwọta ya bụ usoro teknụzụ ị mere, yana ịkpụzi ngwa ọrụ bụ ngwa dị mkpa iji gbanwee ihe ị chere n'eziokwu. Enwere ike nweta ya
Mold Laser mma ebu
A na-eme mkpesa dị omimi nke template mma site na iji ike dị ike nke laser, iji nweta nzube nke ịwụnye cutter.
Gịnị bụ QDC ebu?
The QDC anwụ adopts na mode nke modul Nchikota, na-eji osise mma ịnwụ ma ọ bụ corrosion mma ịnwụ iji wụnye na ngwaike anwụ isi maka punching na ihicha; n'ihi na ndị nwụrụ nwere ike ngwa ngwa dochie dị ka dị iche iche na-anwụ ọnwụ mkpa, na-ewere n'ime uru nke ngwá ọrụ na-anwụ na ziri ezi na nkwụsi ike nke na-anwụ.
N'iji tụnyere ihe osise dị iche iche dị mma na-anwụ: (Japan, n'ozuzu, ọgwụgwọ enyo) ihe dị iche iche chọrọ eriri dị iche iche iji nweta mmetụta kachasị ọnụ. Enwekwara nkpa nma, ihe, ihe ntanye ogbo nke ato ato dikwa oke nkpa. Materialsfọdụ ihe ga-emepụta mgbanwe akụkụ mgbe ọnwụ ọnwụ. Iji mee ka ezigbo ngwa ọrụ nwụọ, ọ dịkwa mkpa ka ụlọ ọrụ na-akpụzi ngwa ọrụ nwee nghọta gbasara njirimara nke ihe ahụ, wee mepụta teknụzụ nhazi kwekọrọ.
▶ Nhazi na n'ichepụta ngwa ọrụ
Anyị na-ewe n'ichepụta usoro nke etching anwụ dị ka ihe atụ ịghọta nhazi na n'ichepụta nke ngwá ọrụ ebu
Usoro eruba nke etching anwụ
Ngalaba nnata a bu oru maka inweta ozi-e ndi ahia ma soro ndi ahia kwurita okwu banyere mmeputa, ikwuputa ihe na oge mbu. Mgbe nkwenye ndị ahịa ahụ gachara, a ga-emepe mpempe akwụkwọ na-akpụzi ma mepụta mkpọpụta. N'ikpeazụ, a ga-eme ka eserese ahụ bụrụ ihe nkiri pụrụ iche maka mmebi, nke a ga-enyefe ya na ngalaba nke corrosion yana usoro ọrụ.
Mgbe ị natachara ihe nkiri na usoro ọrụ, ngalaba corrosion na-akwado ọkpụrụkpụ efere, ogo dị mma na ụdị ihe, wee pịazie ihe nkiri ahụ, bipụta ma kpughee ya. N'ikpeazụ, a na-egosipụta ihe ngosi nke ebu mgbe ọgwụgwọ mmiri mmiri. Ọ bụrụ na arụ ọrụ ngosi ahụ emeghị nke ọma, ọ dị mkpa iji rụkwaa ọnụ ọgụgụ ahụ tupu ịbanye na igwe corrosion maka nrụrụ. Mgbe emechara ihe ndị a chọrọ, enwere ike wepụta ya. Mgbe ịsachara nkwụnye ego coke, enwere ike izipu ya na ngalaba ọzọ. Ngalaba corrosion bụ ngalaba nhazi siri ike maka ebu.
3.cnc ihe osise
Mgbe ha natara ike machining, osise ngalaba na-etinye ya n'ime igwe maka nhazi mgbe visual nnyocha na nkwenye. N'ihi ọdịiche nke nwuo ịnwụ, ihe isi ike na ogologo nke usoro ngwá ọrụ, oge mmepụta dị iche. N'ozuzu, ebu ngwá ọrụ na-ewe oge 1-4, ihe nkedo pụrụ iche dị mkpa chọrọ awa 8 ma ọ bụ karịa karịa 24 awa iji mezue CNC machining. Mgbe emechara nyocha ahụ, a ga-eziga ndị isi otu ahụ na QC mgbe emechara mkpebi na enweghị nsogbu.
QC bụ maka nnyocha nke na-anwụ size, ngwá ọrụ onu, wdg, na bụ maka na-eme nnyocha nnyocha, na mgbe ahụ zigara ka okpomọkụ ọgwụgwọ.
5. dị ka ndị ahịa punching ihe onwunwe na-ekewa abụọ nhazi ụzọ
Ọ bụrụ na ihe anaghị enweta nrapado, enwere ike ịgwọ ya site na ọgwụgwọ ikpo ọkụ n'ozuzu. Na mgbakwunye na ọgwụgwọ okpomọkụ iji mee ka ike sie ike, a ga-etinyekwa ihe na-ejide onwe ya na Teflon. Teflon nwere ike ime ka ngwaahịa ndị ọkpọ ọkpọ ghara ịrapara na ọnwụ, mana n'ihi usoro pụrụ iche, mkpuchi Teflon agaghị emetụta nkọ nke ọnwụ. Mgbe onye nlekọta na-enyocha akụkọ nyocha ahụ, enwere ike ịnwụ ma zipu ya.
6. enyo enyo
Usoro ọgwụgwọ a nwere ike wepu ọka ọka dị n'akụkụ ọnụ mma nke ọnwụ, nweta nsonaazụ enyo, ma dozie nsogbu nke burr na ájá mgbe ngwaahịa a na-akụ ma na-adọta, ma mee ka ihu ngwaahịa ahụ dị larịị ma dịkwa mma. O kwesịrị ekwesị maka ịkụ ọkpọ na ịkpụ ngwaahịa na ihe ndị dị elu. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anyị bụ nke mma enyo ma bụrụ nke naanị ndị na-emepụta ya na China.
Laser anwụ, Ebibi-Drop ịrụzu Rotary Die, Nkpuchi Rotary Nwụrụ, Ulo Oru enyo enyo, Steel Die osise, Nchekwa onwe-ihe ijuputa osise Die,